ကျနော်သတိထားမိတာက မြန်မာပြည်က မွတ်စလင်တွေကို တိုက်ခိုက်ထားတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကို တွေ့မိတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို တိုက်ခိုက်ထားတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကို သတိထားမိတယ်။ ဖတ်တော့မဖတ်ပါဘူး။ အချိန်ကုန်တာပဲရှိပြီး အကျိုးမရှိလို့ပါ။ ဒီနေရာမှာ ဒီဘလော့ဂ်တွေကို ဖန်တီးတဲ့သူတွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးချင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်လို့ ဘာများအကျိုးထူးမှာလဲလို့။
တရုတ်၊ ဟိဒ္ဒူ၊ ခရာဇ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကိုတော့ စော်ကားမော်ကားရေးတဲ့ ဘလော့ဂ်ကိုတော့မတွေ့မိဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။
မြန်မာပြည်မှာ တရုတ်၊ ကုလားနဲ့ပက်သက်လာရင် စီးပွားရေးအဓိကလုပ်တဲ့လူတွေဆိုပြီး အမျိုးမျိုးကဲ့ရဲ့ ရှုတ်ချတာရှိတယ်။ အထင်သေးတယ်။ စော်ကားမော်ကားလုပ်တယ်။ အထူးသဖြင့် ကုလားတွေကိုပေါ့။ အဓိကတော့ သူတို့က မြန်မာပြည်က ဌာနေတိုင်းရင်းသားမဟုတ်လို့လို့ထင်မိတယ်။ သမိုင်းကြောင်းမှာလည်း ထင်ထင်ရှားရှား ချစ်တီးတွေက မြန်မာတွေကို ဂုတ်သွေးစုပ်ခဲ့လို့၊ အနိုင်ကျင့်ခဲ့လို့ဆိုတာတွေလည်း ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ တွေ့မိတယ်။ ဒါကတော့ အရင်တုန်းကဖြစ်ရပ်ဆိုတော့ ပြန်ပြောနေရင် အာညောင်းတာပဲအဖတ်တင်မယ်။ တကယ်လက်တွေ့မှာ အလုပ်မဖြစ်ရုံမကဘူး၊ အချင်းချင်းသွေးကွဲတာပဲ အဖတ်ရမယ်။
ုမြန်မာပြည်မှာ မွေး၊ မြန်မာပြည်မှာကြီး၊ မြန်မာပြည်မှာ ပညာသင်ခဲ့တဲ့ ကုလား၊ တရုတ်တွေ တပုံကြီးရှိပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ လူဆိုးသူခိုးတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ကို ဘာလို့မုန်းကြရမှာလဲ။
မိမိအကျိုးကလွဲရင် ကျန်တာဂရုမစိုက်သူများ၊ မိမိချမ်းသာဖို့ဆိုရင် ဘယ်သူ့ ကိုပဲ ထိခိုက်ထိခိုက် လုပ်ဖို့ဝန်မလေးသူများအားလုံးကို ကျနော်တို့ မုန်းသင့်ပါတယ်။ လူမျိုးတိုင်းမှာ ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိပါတယ်။ မြန်မာကစလို့ ရှမ်းအဆုံးမှာလည်း ဒီလို ပုတ်သိုးနေတဲ့ လူတွေရှိပါတယ်။ ခွဲခြားကြည့်ဖို့ပါ။ ဒါက အနည်းစုပါ။
ဖြစ်နိုင်ရင် ဘယ်ဘာသာကမှ မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်အယူအဆကို မထားသင့်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘယ်ဘာသာက မြင့်မြတ်လဲဆိုတာ ကျနော်နားမလည်လို့ပါ။ မသိလို့ပါ။ ဒုက္ခရောက်ရင် ဘုရားကယ်တယ်လို့တော့ ကြားဖူးတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကျနော်က အကုန်လုံးကို ကိုးကွယ်ချင်တယ်။ ကျနော်ဒုက္ခရောက်ရင် ဘုရားပေါင်းစုံကယ်နိုင်အောင်လို့ ။ ဘုရားတစ်ဆူမအားရင် အခြားဘုရားတစ်ဆူက ကယ်နိုင်မယ်ထင်လို့ပါ။
နိုင်ငံရေး နှင့် ဘာသာရေးမရောစေနဲ့
စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို တော်လှန်နေတာပါ။ တော်လှန်တဲ့နေရာမှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးထွားလာအောင် အားပေးအားမြှောက်လုပ်တဲ့လူမှန်သမျှ ကျနော်တော်လှန်မယ်။ အတွေးအခေါ်၊ လုပ်ဟန် (ကျနော်ကွန်မြူနစ်မဟုတ်ပါ)၊ အပါအ၀င် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ထောက်ခံ၊ ထောက်ခံ ကျနော်တို့ရှုတ်ချတယ်။ ဒီနေရာမှာ မွတ်စလင်မှ၊ တရုတ်မှ မဟုတ်ဘူး။ ထောက်ခံတဲ့လူမှန်သမျှ ခွင့်မလွှတ်ပါဘူး။
လူတွေဟာ အတ္တအပေါ်မှာ အခြေခံကြတာဆိုတော့ မိမိကောင်းစားရေးကိုလုပ်တဲ့လူတွေများတယ်။ လုပ်တာကို အပြစ်မပြောဘူး။ သူများကို မထိခိုက်စေနဲ့။ ဒီနေရာမှာဘာမှသွားပြီး သူကတော့ ကုလားဖြစ်လို့ ၊ တရုတ်ဖြစ်လို့ဆိုပြီး နိုင်ငံရေးထဲက ကန်မထုတ်စေနဲ့။ အားလုံးမြန်မာပြည်သားတွေပဲ။ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲ, ရဖို့အဓိကပါ
စစ်တပ်က ကိုယ်စားလှယ်တွေက သူတို့ကို မဲပေးဖို့အတွက် နည်းမျိုးစုံနဲ့လုပ်မှာပဲ။ ဗလီမကလို့၊ ဘုံကျောင်းဆောက်ပေးဆိုလည်း ဆောက်ပေးမှာပဲ။ ဒါက စည်းရုံးရေးဖြစ်တယ်။ အာဏာရှင်က တရားဝင်အာဏာရှင်ဖြစ်ရေးလုပ်တာကို အားလုံးသိတယ်။ ဗလီဆောက်ပေးတော့ ဗလီရတယ်။ လမ်းဖောက်ပေးတော့ လမ်းရတယ်။ မဲ, တော့မပေးနဲ့။ ရသမျှအကုန်ယူထားပေါ့။
အရင်တုန်းက မွတ်စလင်တွေကို စစ်အစိုးရနှိမ်တယ်။ အခုလက်တလော မဲရအောင် မွတ်စလင်တွေကိုဖားတယ်။ စစ်အစိုးရက သူ့အလုပ်သူလုပ်တာဆိုတော့ ဘာမှမပြောတော့ဘူး။
ဘယ်ဟာ မှားနေတာလဲ။ မှားနေတာကို ထောက်ပြပြီး ဒဲ့ဒိုး တိုက်ခိုက်ပါ။ ၀ါးလုံးရှည်နဲ့တော့ မရမ်းကြနဲ့။ အခု မှားနေတာက ရွေးကောက်ပွဲအတုကိစ္စပဲ။ ဒါကိုလုပ်ပြီး သူတို့အာဏာတရားဝင်ယူဖို့အတွက်လုပ်နေတာက မှန်နေတာလား။
ဘယ်လူမျိုး၊ ဘာသာကွဲမဆို သူတို့ကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားပေးထောက်ခံတာကိုတော့ ကျနော်တို့ရှုတ်ချတယ်။ စစ်အစိုးရကိုအားပေးနေတဲ့လူတွေထဲမှာ မြန်မာလည်းပါတယ်။ ရခိုင်လည်းပါတယ်။ တရုတ်လည်းပါနိုင်တယ်။ ကုလားလည်းရှိတာပဲ။ ဆိုတော့ လူအမျိုးအမျိုး၊ ဘာာသာအမျိုးအမျိုးရှိနိုင်တယ်။ ဒီလူတွေက ဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲမှာ ဘာမှသုံးစားလို့မရတဲ့လူတွေပဲ။ ဒီလိုမျိုး လူပုတ်သိုးတွေကိုပဲ တိုက်ခိုက်ပါ။
ဖြစ်နိုင်ရင် ခွဲခြားပြီး မြင်နိုင်အောင် ကျိုးစားကြည့်ပေါ့။
မှတ်ချက်။ ။ သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့ဗမာနှင့် အပေါင်းအပါများသို့ ရည်ညွှန်းသည်။
ဒီတော. မနေနိုင်လို. အပြစ်ဝင်ပြောမယ်ဆိုရင်
(၂)ဖက်စလုံးကို ပြောပါ ။မျှမျှတတဖြစ်ပါစေ။
မျိုးမစစ်ရင်တော. မျိုးမချစ်တတ်ပါဘူး ။
လူတိုင်းမှာ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိပါသည်...ကိုဘုန်းကျော် ဘယ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကိုးကွယ် ဘယ်ဘုရားကို ယုံကြည်ယုံကြည် ကျွန်တော်နှင့် လုံးဝ သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ..ဒါပေမဲ့ ကိုဘုန်းကျော် ရေးထားတာလေးကိုတော့ သဘောကျမိပါသည်.."ဒုက္ခရောက်ရင် ဘုရားကယ်တယ်လို့တော့ ကြားဖူးတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကျနော်က အကုန်လုံးကို ကိုးကွယ်ချင်တယ်။ ကျနော်ဒုက္ခရောက်ရင် ဘုရားပေါင်းစုံကယ်နိုင်အောင်လို့ ။ ဘုရားတစ်ဆူမအားရင် အခြားဘုရားတစ်ဆူက ကယ်နိုင်မယ်ထင်လို့ပါ။" ကိုဘုန်းကျော် ရေးထားတဲ့ စာထဲမှာဘဲ ကိုဘုန်းကျော်ရဲ့ ဇာတိက ပြနေပါပြီ။ ကိုဘုန်းကျော် ဟာ မိမိအတွက် အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် ယောက်ကျာင်္းတိုင်းကို အဖေခေါ်မယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံဖြစ်နေပြီး မိစ္ဆာဒိဌိ အယူကိုလည်း လက်ခံမယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်နေပါသည်။ ကိုဘုန်းကျော် ရေးထားသလို အမှန်တကယ်ပင် ကိုဘုန်းကျော်တစ်ယောက် နိုင်ငံရေးကို လုပ်ခဲ့သည် ဆိုစေအုန်းတော့ အကျိုးအမြတ်မရှိရင် "နောက်ပြန်ပြေးမဲ့ ဖောက်ပြန်ရေးသမားတစ်ယောက်" ဆိုတာ သေချာနေပါပြီ...ကျွန်တော်သည်လည်း မင်္ဂလာဒုံ 982 ပစ္စည်းထိန်း အင်ဂျင်နီယာ တပ်မှာ ကြီးပြင်းလာသူပါ..အောင်ဆန်းသူရိယ လှသောင်းကျောင်းထွက် တယောက်လို့ ကိုဘုန်းကျော်က ရေးထားပေမဲ့ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံတွေကတော့ ကျောင်းရဲ့ ဂုဏ်ကို ကျဆင်းစေပါသည်..နောက်တခု ပြောချင်ပါသေးသည်။ သူပုန်လုပ်ချင်လို့ လူ့ဘောင်သစ်ကို ၀င်တယ်ဆိုတာ ရယ်စရာမှ အလွန်ကောင်းသလို ရှက်တတ်ရင် ရှက်စရာ ကောင်းလှပါသည်..လူ့ဘောင်သစ်ဆိုသည်မှာ ပါတီတခုသာ ဖြစ်ပါသည်..ပါတီဆိုင်းဘုတ်အောက်ကနေ သူပုန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ ပျက်လုံး တခုလို့ ဖြစ်နေပါသည်...အမှန်တကယ် သူပုန်လုပ်ချင်သူက ဆိုင်းဘုတ်အောက်မှာ ခိုပြီးအော်မနေပါ...အခု ကိုဘုန်းကျော်က သြစီမှာ ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ မဲဘုန်းမြို့ မှာ ရှိနေတဲ့ 204 တပ်ရင်းမှူးဟောင်းကိုသိုက်ထွန်းဦး ကို တွေ့အောင် ရှာပြီး သူပုန်ဆိုတာ ဘာလည်း လို့ မေးကြည့်စေချင်ပါသည်...ဒီလောက်ဆို နားလည်သဘောပေါက်မည်ထင်ပါသည်...
ဆိုတာသူဘဲကို၊လေးစား၇ပါဧ။် ၊ မှတ်သား၇ပါဧ။်